Vaimbove Secretary of State weHurumende Colin Powell anofa kubva kuCOVID-19 pazera makumi masere nemana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Vaimbove Secretary of State weHurumende Colin Powell anofa kubva kuCOVID-19 pazera makumi masere nemana
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vaimbove Secretary of State weHurumende Colin Powell anofa kubva kuCOVID-19 pazera makumi masere nemana.
Powell akaodzwa mwoyo nekuenda kwebato rake kurudyi uye akatotsigira pachena Barack Obama mukuda kwake kumutungamiriri wenyika. Powell akatsigirawo kukwikwidza kwaJoe Biden kuti atungamire nyika, achiti aizove "mutungamiri isu tese tichadada kukwazisa salute."
Vakasiya basa nyeredzi maneja uye vaimbova Secretary of State weU.S., Colin Powell, vashaya nekuda kwematambudziko kubva kuCOVID-19.
Colin Powell anga achigamuchira kurapwa kuWalter Reed National Medical Center.
Colin Powell akange aonekwa aine multiple myeloma.
Colin Powell, ane mukurumbira muRepublican, aive wekutanga murume wemuAmerica kushandira se US Secretary of State, vashaya vava nemakore makumi masere nemasere, nekuda kwematambudziko kubva ku COVID-84.
Ane makore makumi matatu nemashanu muhondo yeUS Army, akasimuka kusvika pachinzvimbo cheyeredzi-nyeredzi asati apinda mune zvematongerwo enyika, anga achigamuchira kurapwa kuWalter Reed National Medical Center, paanofa, mhuri yake yazivisa nhasi muchinyorwa rake Facebook peji.
"Takarasikirwa nemurume anoshamisa uye ane rudo, baba, sekuru uye muAmerica ane mukurumbira," vakadaro, vachiwedzera kuti akabaiwa jekiseni re COVID-19, asi zvakazotora hupenyu hwake.
Mhuri yaPowell yakatenda vashandi vekurapa "nekuchengeta kwavo." Chikonzero cherufu chakanzi "matambudziko kubva kuCOVID-19." Akapfuura mangwanani eMuvhuro mangwanani.
Akarega basa-nyeredzi maneja anga aonekwa aine multiple myeloma, sekureva kwenhau, rudzi rwekenza yeropa inotadzisa kugona kwemuviri kurwisa hutachiona.
Colin Powell akashanda sachigaro weJoint Chiefs of Staff, chinzvimbo chepamusoro muchiuto muUS department reDziviriro, pasi peMutungamiri George HW Bush, uye aive munhu wechidiki uye wekutanga muAmerican America kubata chinzvimbo ichi.
Powell akatonzi achazoitwa mutungamiri wekutanga mutema weUS, mushure mekuzivikanwa kwake kwakakwira zvichitevera danho rakatungamirwa neUS kurwisa kwaSaddam Hussein kupinda kweKuwait muna1990.
Akazoshanda saGeorge W. Bush wekutanga Munyori weHurumende uye, panguva iyoyo, akave chinzvimbo chepamusoro chevatema veruzhinji. Muna 2003, Powell akaita nyaya yake yehutongi yekupinda muIraq kuUnited Nations, achitaura nezvehungwaru hwakashata hwekuti Hussein's Ba'athist hurumende yaichengeta zvombo zvekuparadza vanhu vazhinji.
Mumufananidzo iye zvino-wakajeka, akasimudza vial yemhando yefaux anthrax pamberi peUN General Assembly, asi akauya kuzobvuma chiitiko ichi se "blot" pane zvinyorwa zvake. Izvo zvakatevera yaive hondo yemakore masere inoparadza.
Inofungidzirwa kuti vanopfuura mamirioni eIraq vakarasikirwa nehupenyu hwavo mumhirizhonga kana nekuda kwekutorerwa kwakakonzerwa nekupinda uku, uye zviuru zvemauto eAmerica akafa panguva yekuyedza kweUS kuIraq. Mhedzisiro yekupinda kwakatungamira mukupararira kwemhirizhonga yemapoka uye kusimuka kweIslamic State (IS, yaimbova ISIS).
Powell akaodzwa mwoyo nekuenda kwebato rake kurudyi uye kunyangwe akatsigirwa pachena Barack Obama mukuda kwake kuve mutungamiri wenyika.
Powell akatsigirawo kukwikwidza kwaJoe Biden kuti atungamire nyika, achiti aizove "mutungamiri isu tese tichadada kukwazisa salute."
Powell aive nevana vatatu uye asara nemukadzi wake, Alma, waakaroora muna 1962.
MaGerman anoti auf Wiedersehen kukumbundira uye kubata maoko mu...